I-Port of Los Angeles Pier 400 Proward Advances - I-Ellicott Dredges Blog
IPort of Los Angeles 'Pier 400 Project Iqhubekela Esigabeni Sesibili;
IGreat Lakes Dredge & Dock isebenzisa i-Ellicott® Brand dredge "Florida" ukumpompa umhlaba ama-cubic mayards ayizigidi ezingama-50
Source: I-World Dredging Mining & Construction & International Dredging Review
Ngo-Agasti 18, 1997, iPort of Los Angeles kanye ne-US Army Corps of Engineers babungaza iPier 400 Project, iphrojekthi enkulu yokudonswa komhlaba kanye nokugcwaliswa komhlaba e-USA, kwakhiwa iziteshi ezijulile zokuvumela imikhumbi yamabhontjisi amakhulu namathangi amakhulu ukuba angene ePort's iPiers entsha 300 no-400.
Izinto eziboniswe kusukela ekwakhiweni kwesiteshi zizosetshenziselwa ukwengeza cishe amahektare we-600 (amahektha we-242.8) ethekwini ukusiza ukuthwala okuphindwe kabili okulindelekile kwezimpahla ezihamba ngePort eminyakeni elandelayo ye-20. Iphrojekthi yonke ibiza ngaphezulu kwe- $ 300MM ihlukaniswe cishe ngesigamu phakathi kweSite 1 neStage 2.
IMeya yaseLos Angeles uRichard J. Riordan uthe, “ITheku laseLos Angeles lingelinye lamatshe ayigugu eDolobha lethu, livula amathuba emisebenzi, lisekela umnotho wendawo, lisixhumanisa nomhlaba wonke. Namuhla, sigubha ukwanda okukhulu kunakho konke emlandweni wamachweba ase-US - kanye nobuchule obusha obuzosiqhubela ekuphakameni okukhulu kakhulu. ”
UBrig. UGeneral J. Richard Capka, umphathi, we-Army Corps of Engineers, South Pacific Division, uphawule wathi, “Abahleli abavela kuzo zombili i-Port of Los Angeles kanye ne-Corps kumele bahalaliselwe ngokuqinisekisa ukuthi isibalo esidingekayo sempumelelo - ezomnotho, ezobunjiniyela kanye imvelo - ibilinganisiwe kule phrojekthi. Siyaziqhenya ngeqhaza lethu ekuthuthukiseni leli chweba, sibuyela emuva ngasekupheleni kweminyaka yama-1800 nokwakhiwa kwesifunda saseCorps 'Los Angeles. Silangazelele ikhulu lethu lesibili lokusebenzela abantu besizwe kanye neSouthern California. ”
Zombili izinkontileka zeSigaba I no-II zanikezwa i-The Pier 400 Constructors, umsebenzi ohlanganyelwe weGreat Lakes Dredge & Dock Co kanye neConnolly-Pacific Co. Inkontileka eyizigidi ezingama- $ 148.6 yanikezwa iSigaba I ngoJuni 1994. Le phrojekthi yayihlanganisa ukuthuthukiswa kwe 3 mi. yeziteshi ezintsha, ezibanzi zokuzulazula, umcengezi ojikajika kanye no-5000 linear ft wendawo ye-berthing eningizimu yePier 300 e-Terminal Island.
Ukumiswa kabusha kwe-29 million yd3 yezinto ezibonakalayo kukhiqize ukujula kwamanzi kwe-45 ft kuya ku-63 ft ukuze kuhlaliswe iziqukathi ezijulile zokususa kanye nemikhumbi eningi eyomile. Izinto ezibunjiwe ziqukethwe ngemuva kwamadwala wedwala, enza i-265-acre (i-107.3 hectares) yendawo entsha ebizwa ngokuthi yiPier 400, etholakala ethekwini elingaphandle eningizimu yeTheminali Island. Le acreage ifaka i-corridor emincane yokugcwaliswa okusha okuzoxhuma i-Pier 400 ne-terminal Island eduze komngcele weLos Angeles - umngcele weLong Beach. Umhlaba omusha uhlinzeka ngokuvikelwa okungaphakathi kwe-etheku kumaza namagagasi.
AmaGreat Lakes asebenzise ama-36 ″ (914 mm) awo I-Ellicott® brand dredge "EFlorida ” ukwenza iningi lomsebenzi kulo msebenzi. I- "Florida“, Ene-HP (16,000 kW) efakwe ngaphezulu kwe-12,000, kubikwa ukuthi iyindawo enkulu futhi enamandla amakhulu okusika umsiki e-United States. Kukhiqize kuze kufike ku-138,000 yd3 / ngosuku kulo msebenzi ukuze amaGreat Lakes akwazi ukuqeda izinyanga ezintathu ngaphambi kwesikhathi.
IStage II manje sisaqhubeka nenkontileka yezigidi ezingama- $ 150 ezihlelelwe ukuqeda ngoJanuwari 2000. Isigaba sesibili sephrojekthi sizokhulisa ijubane lesiteshi se-63-ft ku-81 ft, ​​sandise isiteshi se-50-ft futhi sakhe isiteshi se-75-ft-deep ohlangothini olusempumalanga lwePier 400, iSiteji I. Isilinganiselo se-22 million yd3 sezinto ezibunjiwe kuzodala i-325-acres eyengeziwe (amahektha we-131.5).
I-dredge kagesi yavuselelwa ekuqaleni kwama-1980s ukuze isebenze endaweni yaseLos Angeles, lapho iBhodi Yezomoya Yokulawula i-Air ikhetha ukuthi yonke imishini yokwakha emile inikwe amandla kagesi. Ngemuva kokuthi kufakwe ipompo yesitebhisi esitebhisini esingamamitha angu-115 phakathi nokujula kokuqala kweziteshi, i-34-inch dredge yayinamandla anele okupompa amabanga amade adingekayo ngaphandle kwamaphampu wokuqinisa. Phakathi nale phrojekthi, uzopompa izinyawo eziyi-18,000 ukusuka esiteshini sokungena sogu lolwandle kuya ekugcwaliseni. Ngesikhathi sokwakhiwa kwephaseji yezokuthutha, ulayini wokukhipha omude kunayo yonke wawuyizinyawo eziyi-12,000. Njengoba kunesikebhe sokuvilapha esingamamitha angu-184 esifakwe ngemuva, ubude baseFlorida bungamamitha angu-450, okuvumela ukujiya okubanzi.
Ukushayela okukhulu kwepompo yi-10,000 HP, i-13,200 volt Canadian General Electric motor. Amandla we-Shore eza dredge nge-15,000 izinyawo zekhebula esindayo, efakwe ngamabhareji akabili.
Imoto yaseCanada itholakala esicelweni sokuqala sedredge. I-Ellicott® International yakha i- "Florida", Bese kuthiwa"UClarence B. Randall“, Kanye nodade ofanayo dredge ngo-1953 emayini yensimbi iCaland Ore's Steep Rock Canada. Ama-dredges amabili asebenze ubusuku nemini ukususa amakhulu ezigidi zama-cubic metres womthwalo osindayo - ngaphezu kwamamitha ayikhulu ukujula. Iphrojekthi ye-Steep Rock ihlala iphrojekthi eyodwa enkulu kunazo zonke yezimayini ezakhiwe ezake zenziwa. Kuyisipho kumazinga wokuklanywa komkhiqizo we-Ellicott® ukuthi imishini esemqoka isasebenza ngaphezu kweminyaka engama-40 kamuva, nokuthi isakhiwo somkhumbi samukela ukuthuthuka okwalandela okuchazwe ngenhla.
Ngenkathi amaGreat Lakes elungiselela i- "Florida”Kumaphrojekthi we-Pier 400 ngo-1997, ikwazile ukuthembela ku-Ellicott® International ukuthi ikunikeze imininingwane ephelele yobunjiniyela, ngaphezu kweminyaka engama-40 ngemuva kokwakhiwa, ukusiza ukuthuthuka kweGreat Lakes kulo dredge.
Itheku lihlele ukuthi le ndawo izokwakhiwa ngamakhonteyina, indawo enamanzi amaningi nezitimela. IPhrojekthi 400 inikeza izinzuzo ezibalulekile kwezomnotho kubandakanya ukukhushulwa kwamaholo wangempela kusuka ku- $ 24.3 billion kuya ku- $ 40 billion. Ngaphezu kwalokho, iminikelo yentela yombuso, yezwe neyasekhaya izokhuphuka isuka ku- $ 12 billion iye ku- $ 19.8 billion. Iphrojekthi yokumba kabusha nokulahla udoti iyitshe legumbi lePort's Pier 300/400 Implementation Program, uhlelo olungu- $ 650 million oluhlanganisa amaphrojekthi ahlukene angama-24. Kungumsebenzi omkhulu wokwenziwa kwenhlokodolobha omkhulu kunayo yonke ichweba lase-US kanye nephrojekthi yokuthuthuka kakhulu yePort emlandweni wayo weminyaka engama-90.
Uhlelo Lokusebenzisa iPier 300/400 luyingxenye yetheminali eseningizimu ye-Alameda Corridor, umzila wesitimela nomgwaqo wezokuthutha ongamakhilomitha angama-20, oxhumanisa amachweba eLos Angeles naseLong Beach kunethiwekhi yezitimela ezihamba phakathi kwamazwe nokwakha izindlela ezisheshayo nezisebenza kahle ukusabalalisa imithwalo kulo lonke elaseMelika. Itheku laseLos Angeles lingenye yamachweba amatasa kakhulu emhlabeni futhi lisebenza njengesango elibalulekile lase-US West Coast lezentengiselwano zomhlaba wonke. IPort engamahektare angama-7500 inezikhungo ezinkulu ezingama-30 ezihamba phambili ngamamayela angama-28 ngasempumalanga ezisebenza kakhulu ngezimoto, nge-breakbulk, ngamakhonteyina, ngobuningi obomile nokusebenza kwemithwalo eyinqwaba yamanzi.
Ngokubona ukubaluleka kwetheku eLos Angeles, i-Army Corps of Engineers - ochwepheshe bezobunjiniyela bakahulumeni - bakhe iSifunda saseLos Angeles ngo-1898 ukwenza lula ukwakhiwa kohlelo lwaso lwetheku. Namuhla, ngaphansi kwalowomoya ofanayo wokubambisana nokusebenzisana okudala, iCorps iyaqhubeka nokusiza iPort ngobungcweti bayo kwezobunjiniyela, okwenza ichweba laseLos Angeles libe elinye lamatheku amakhulu okuhweba aseMelika.
Kucashunwe ku-World Dredging Mining & Construction & International Dredging Review